यो व्यंग्यात्मक छ, तर धेरै मानिसहरू चिसो बाट उम्कन र खजुरका र न्यानो समुद्र छालहरू बीच नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या खर्च गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ, जहाँ यो हिउँदमा न्यानो छ स्थानहरू खोजिरहेका छन्। त्यहाँ केही थप असामान्य अनन्त गर्मी, रंगीन परम्परा र स्थिर आश्चर्य को देश मा हिउँ को किनाराको देखि उडान भन्दा छ किनभने यस्तो यात्रा, सबैलाई सम्झना गरिनेछ। यो तपाईं मजा र गर्दा गर्न दूर जाडो दिन रोचक हुनेछ जसमा सही देश चयन गर्न मात्र रहनेछ।
जहाँ यो हिउँदमा न्यानो छ लोकप्रियता, पहिलो स्थान, थाईल्याण्ड छ। यो द्वीप राष्ट्र पानी amidst सेट गरिएको छ , यो अंडमान सागर को सदैव गर्मी र सूर्य को चौडाई मा। नोभेम्बर अप्रिल गर्न - यो थाईल्याण्ड मनोरञ्जनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त गरेको छन् जाडो महिना हो भनेर टिप्पण लायक छ। हरेक दिन त्यहाँ चमक सूर्य हुनेछ र हावा तापमान यहाँ समुद्रले पनि व्यापक shallows धेरै न्यानो धन्यवाद छ तल 25 पर्दैन। यसको लागि सही ठाँउ हो सुहागरात, र बच्चाहरु संग परिवार को लागि, र नयाँ वर्ष उत्सव लागि।
दुबई - मुस्लिम संसारको हृदय मा स्थित छ जो भविष्य, को शहर। 30-35 डिग्री - हावा तापमान को क्षेत्र मा मार्च गर्न अक्टोबर देखि सबै भन्दा एक आराम ब्रेक लागि उपयुक्त छ। हालै यहाँ जन्म भएको थियो जसले कुनै पनि पर्यटक गरेको आनन्द र न्यानो समुद्र र सेतो द्वीप वास्तुकला र Transcendental। यो ठाउँ छ जहाँ यो हिउँदमा न्यानो छ तपाईंले यो शहर को सबै धन अन्वेषण गर्न निर्णय भने, त्यसपछि जनवरी र फेब्रुअरी यहाँ जानुहोस् त, र गर्मी धेरै तातो।
को जाडो महिनामा उपस्थिति मा undoubted नेता मेक्सिको र यो चारै ओर सबै ती सानो होल्डर छ क्यारेबियन। मध्य अमेरिका मा अंक को कुनै पनि उड नै बारे खर्च हुनेछ, तर रंग, फरक देशहरुमा यस्तै, तर यो अझै पनि केही मतभेद छ हुनत। सबै भन्दा प्रसिद्ध स्वर्गीय स्थान मेक्सिको - क्यानकुन - तपाईं स्वतन्त्रता एक वीरान समुद्र तट मा, conversely, को हल्ला पक्ष फेला पार्न र तिनीहरूलाई रमाइलो गर्न महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, वा। साथै, एक अद्वितीय पानी संग्रहालय, हरेक वर्ष पर्यटक लाखौं द्वारा भ्रमण छ जो छ। नजिकका स्थानहरू जहाँ हिउँदमा गर्मी - जमाइका, कोस्टा रिका, पनामा, डोमिनिकन गणतन्त्र र धेरै अन्य। यो मुख्य रूप स्पेनिश यी देशहरूमा भने छ, तर सबैलाई अंग्रेजी बुझ्नुहुन्छ। र नृत्य साल्सा र bachata सिक्न गर्न ठाँउहरु भ्रमण भूल छैन।
तपाईं जाडो, जहाँ न्यानो र खुसी सर्फ मा उड एउटा असामान्य थप स्थान खोजिरहेको भने, त्यसपछि भारत जाने। यो देश उनीहरूको अद्वितीय संस्कृति र धनी प्रकृति को अरू indifferent जो कोहि छोड्न छैन। भारत, स्थानीय परम्परा लागि ठूलो श्रद्धाको साथ, धेरै विश्वास र संस्कार हो। तपाईंले तिनीहरूलाई केही सामेल गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले सबै भइरहेको तर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै कुरा के, तपाईं सधैं तुरुन्तै न्यानो समुद्र मा, नुहाउने गर्न सक्नुहुन्छ ट्रपिकल हरियो alleys मार्फत लक्षविना हिड्नु र अचम्मको भवन bylymi राष्ट्रका यहाँ बायाँ हेर्नुहोस्।
निस्सन्देह, कारण यसको affordability र पूर्वाधार विकास गर्न यो एक लोकप्रिय मिश्र छ। यहाँ निरन्तर रूसी पर्यटक आउने छन्, र धेरै रिसोर्ट्स थप हाम्रो colonies सदृश छन्। जहाँ यो मिश्र मा हिउँदमा न्यानो के तपाईंलाई थाहा छ भने, त्यसपछि Sharm एल शेख जानुहोस्। त्यहाँ सधैं तातो छ, र यो क्षेत्र न्यूनतम वर्षा छ।
मेट्रो स्टेशन "उल। Podbelskogo"
मास्को देखि याल्टा प्राप्त गर्न कसरी केही सुझावहरू
क्रान्तिकारी आविष्कार वर्तमान - प्रशिक्षक Ab Ab रकेट
संशोधन छ ... अवधारणा
पानी वाल्व के हो? उपकरण, चित्रकला र क्षेत्रीय जडान
ल्याप्टपमा स्पर्श माउस कसरी असक्षम पार्नु हुन्छ? टचप्याड सक्षम गर्न तीन तरिकाहरू
वालपेपर गैर-बुना: हानिकारक, सबै
आर्थिक सिद्धान्तहरूको इतिहास
रसद प्रणाली - रसद को आधारभूत छ ...